Inona ny nomeraon'ny visa? Atorinay anao ny fomba hahitana azy | Vaovao momba ny dia
Monica sanchez | | soso-kevitra
Raha mikasa ny handeha hitsangatsangana firenena ianao dia mety mila ilay fahazoan-dàlana. Ity dia fahazoan-dàlana nomen'ny firenena aleha alohan'ny alàlan'ny kaonsily na masoivohon'izy ireo ao amin'ny firenena niaviany. Misy karazana visa isan-karazany, ary miankina amin'ny halavan'ny fotoana kasainao hijanonana, ka hisafidiananao ny iray na ny iray hafa.
Amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava isika aiza ary ahoana no fomba hangatahanao azy, ary hanampy anao hahita ny laharan'ny visa izahay. Aza adino izany.
1 Ny visa na visa, antontan-taratasy ilaina amin'ny dia
2 Fepetra takiana amin'ny fangatahana visa
3 Karazana Visa
4 Iza ireo firenena mitaky visa ho an'ny teratany espaniola?
5 Ahoana ny fomba fangatahana visa visa?
6 Azon'izy ireo atao ve ny mandà visa ho ahy?
7 Maharitra hafiriana ny fikarakarana visa?
8 Inona ny nomeraon'ny visa?
Ny visa na visa, antontan-taratasy ilaina amin'ny dia
Ny visa dia antontan-taratasy mifamatotra amin'ireo pasipaoron'ny manampahefana izay manondro fa efa nozahana sy noheverina ho marina ny antontan-taratasy. Tsy maintsy atao ny manao azy any amin'ny firenena maro. Ohatra, any Etazonia, na handany andro vitsivitsy fotsiny ianao na raha te hipetraka eo dia tsy maintsy entinao miaraka aminao izany, satria raha tsy izany dia hataon'izy ireo hiverina any am-piandohana ianao.
Fepetra takiana amin'ny fangatahana visa
Ny hany takiana dia izany ny fijanonana dia tokony ho 90 andro mahery (telo volana).
Amin'ny ankapobeny, misy karazana visa roa:
Mijanona: Ity no ho takiana aminao raha toa ka hanao dia lavitra ianao na hianatra.
Fonenana: raha avy miasa ianao (miasa irery na miasa) na mijanona sy miaina.
Nefa miankina amin'ny firenena sy ny anton-dianao dia misy maromaro hafa:
Diplomaty, tompon'andraikitra, mpiasan'ny fikambanana iraisam-pirenena ary ny OTAN
Iza ireo firenena mitaky visa ho an'ny teratany espaniola?
Raha Espaniôla ianao ary handeha hitsangatsangana amin'ireo firenena ireo, ankoatr'i Etazonia, dia mila mangataka visa ianao:
Ahoana ny fomba fangatahana visa visa?
Ny visa mpizahatany, fantatra amin'ny anarana hoe B2, no antontan-taratasy ilainao handehanana any amin'ny firenena. Hanampy anao izany fitsangatsanganana, fitsidihana fianakaviana na namana, na hanaovana fitsaboana; fa tsy ho afaka hampiasa azy io ianao hiasa. Raha hitan'ny Immigration dia afaka manafoana ny visa-nao izy ireo.
Ity dia visa tsy mpifindra monina, izay midika fa raha ny fitsipika dia tsy mikasa ny hipetraka maharitra ao amin'ny firenena ianao. Raha miova hevitra ianao amin'ny farany, tsy maintsy mangataka fahazoan-dàlana mifanaraka amin'izany ianao.
Mangataka izany, Tsy maintsy mankany amin'ny masoivoho na consulat an'ny firenena aleha ianao any amin'ny firenena niavianao. Makà sarinao mampiseho ny endrikao sy ny pasipaoronao. Tsy maharary koa ny maka carte de crédit, satria amin'ny tranga maro dia tsy maintsy mandoa vola ianao.
Azon'izy ireo atao ve ny mandà visa ho ahy?
Mahalana izy io, fa miankina amin'ny tranga tsirairay avy. Mba hisorohana an'izany dia miezaha mandresy lahatra ny tompon'andraikitra amin'ny kaonsily fa, voalohany, tsy mikasa ny hijanona sy ho velona ianao ary, faharoa, fa manana loharanom-pahalalana ampy ianao. Noho io antony io dia tokony ho fantatrao fa raha nangataka karatra fonenana ianao ary mangataka visa, dia azo inoana fa tsy hanome anao izy ireo.
Maharitra hafiriana ny fikarakarana visa?
Raha manolotra ny zava-drehetra amin'ny tanana ianao ary hita fa marina ireo antontan-taratasy ilaina, dia mazàna tsy mihoatra ny dimy andro fiasana. Tsy dia be loatra izany, ary azonao atao ny manararaotra izany mba handaminana ny dianao.
Raha vantany vao azonao io dia mety hanontany tena ianao hoe inona ilay nomeraon'ny visa, satria manana ireto karatra ireto isa marobe manana ny mampiavaka azy ireo, ka andao hojerentsika ny fomba ahafahantsika mamantatra azy io haingana.
Raha te hahita ny laharan'ny Visa ao anaty antontan-taratasy dia mila manana izany eo an-tanantsika fotsiny isika ary afaka mahita azy eo aloha. Amin'izany fomba izany dia tsy maintsy jerentsika eo amin'ny ilany ambany ihany ny fampahalalana izay mena, mazava ho azy ny andian-tarehimarika maneho ireo toetra ireo ny laharan'ny Visa nandrasana hatry ny ela.
Nahita azy ve ianao? Izao dia mila fotsiny soraty ny nomeraon'ny visa na mitadidy azy hialana amin'ny fahasarotana. Ankoatr'izany dia tsy tokony hanana olana ianao amin'ny fahitana ny nomeraon'ny visa anay, tsy dia miova izany matetika.
Hanampy anao ity nomeraon'ny visa ity manavao ny visa-nao raha te hijanona kely kokoa ianao. Mazava ho azy, tsarovy, raha miova ny anton'ny dianao dia zava-dehibe ny fangatahanao ny visa mifanaraka aminy. Ka tsy mila miahiahy na inona na inona ianao.
Manantena izahay fa nanampy anao hahafantatra ny atao hoe visa, inona izany ary ahoana no hahitana ny nomeraonao. Soava dia!
Ny pasipaoro tsara indrindra sy ratsy indrindra hitety an'izao tontolo izao
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Tsangatsangana » soso-kevitra » Inona ny nomeraon'ny visa?
Eo amin'ny andalana voalohany amin'ny visa anao izany.
GuillerminaVillegas dia hoy izy:
Ahoana no ahafantarako ny isan'ny visa Amerikaniko, raha very aho?
Valiny tamin'i GuillerminaVillegas
Yrianda del Carmen Gonzalez Cruz dia hoy izy:
Valiny tamin'i Yrianda del Carmen Gonzalez cruz
Sarahí Martínez dia hoy izy:
Nahazo ny visa-aho tamin'ny taona 1994 fa manana isa 6 isa fotsiny ireo ary saika ny tombo-kase ao amin'ny pasipaoroko izay tsy milaza mihoatra ny tanàna nahazoana azy sy ny datin'ny namoahana azy. Ao amin'ny taratasy fangatahana visa dia manontany ahy izy ireo raha efa nanome visa ahy izy ireo taloha, tokony hanaiky aho na tsia?
Valiny tamin'i Sarahí Martínez
Magdalena garcia dia hoy izy:
Manana ny visa amerikana amin'ny carte plastika aho ary tsy hitako ny laharana fanaraha-maso. Maika aho satria tsy maintsy mameno takelaka ary tsy te-hametraka nomera diso.
Valiny ho an'i Magdalena Garcia
Jorge Alarcon dia hoy izy:
Ahoana no hahitako ny isan'ny visa mpizahatany amerikanina raha tsy manana pasipaoro teo aloha aho ary nanamboatra an'ireny visa ireny tany Medellin sy Bogota Colombia.
Valiny tamin'i Jorge Alarcon
Lazao amiko raha nisy olona namaly anao satria tsy hitako koa izay fomba hananana ny nomeraoko visa izay nangalarina tamiko niaraka tamin'ny pasipaoroko!
Ny karazan-visa (B1 / B2) avy amin'ny EU izay ananako dia manana kaody barcode, efa notsikiliko ary mitovy ihany ny hita eo amin'ny sisiny ankavanan'ny barcode, amin'ny faran'ny visa hafa, fa amin'izao fotoana izao raha soratako amin'ny taratasy fitsangatsanganana izay manontany ahy, tsy fantany aho. Milaza izy io fa tsy maintsy litera arahin'isa 7 (#s) na 8 isa (#s) ary hita eo amin'ny ilany ambany ankavanan'ny antontan-taratasy izy io ary eo no isan'ny nambarako teo aloha sy izay nataoko Ny tsy mahita dia. ekena ho isan'ny visa.
MYRIAM dia hoy izy:
Ity fampahalalana ity dia tsy mihatra amin'ny visite hatramin'ny taona lasa, IZAHAY NAMOAKA tamin'ny 2008 ary TSY MISY FORMAT AZY. ARY soratako ilay tonga any ambadika any misy ny bandy MAGNETIKA, FA TSY MANAIKY AZY
Valiny amin'i MYRIAM
JUAN ALFREDO HIDALGO CABRERA dia hoy izy:
NY VISAAKO dia Navoaka tamin'ny 2006, izay misy ny laharan'ny VISA. MISAOTRA ANAO.
Valiny tamin'i JUAN ALFREDO HIDALGO CABRERA
Fitsangatsanganana ataon'ny Emirà, Emirà Manidina
Torohevitra hahazoana sidina mora vidy kokoa